တခါက အသကျ ၅ နှဈအရှယျ ကလေးမလေး တယောကျဟာ မိခငျဖွဈသူ ပေးထားတဲ့ ပနျးသီးလေး နှဈလုံးကို လကျထဲ ကိုငျပွီး ဆော့ကစား နတေယျ။
အဲဒီ အခြိနျမှာပဲ မိခငျဖွဈသူက သူ့အနား ရောကျလာပွီး "သမီး မစားရငျ မမေကေို့ ပနျးသီး တလုံး ပေးပါလား" လို့ ပွောတော့ ကလေးဖွဈသူက ပနျးသီး နှဈလုံးကို ကွညျ့ပွီး တှသှေားတယျ။
နောကျတော့ ဘာမပွော ညာမပွော ပနျးသီး တလုံးကို ခကျြခငျြး ကိုကျလိုကျတယျ။
မိခငျလုပျသူက ပိုနတေဲ့ ကနျြတလုံးကို ပေးမယျ အထငျနဲ့ စောငျ့ကွညျ့ နပေမေယျ့ ကလေးငယျက နောကျပနျးသီး ကိုလညျး မပေးပဲ ထပျကိုကျ ပွနျတယျ။
ထိုအခွငျးအရာကို မွငျတဲ့ မိခငျဖွဈသူလညျး စိတျမကောငျး ဖွဈသှားတယျ။ ရငျထဲ နာကငျြသှားပွီး ကလေးဖွဈသူ အနားက ထှကျမယျ လုပျတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ ကလေးဖွဈသူက သူကိုကျလကျစ ပနျးသီး တလုံးကို လှမျးပေး လိုကျတယျ။
"မမေေ ဒီအလုံးလေးက ပိုခြိုတယျ၊ ဒါလေး စားကွညျ့လိုကျ" လို့ ကလေးငယျက ခဈြဖှယျ ပွုံးရငျး ပွောတယျ။
ထိုအခါမှ အဖွဈမှနျကို ရိပျမိလိုကျတဲ့ မိခငျဖွဈသူဟာ ကွညျနူးစှာ ပွုံးလိုကျတယျ။ နောကျတော့ သူပေးတဲ့ ပနျးသီးလေးကို ယူပွီး ခေါငျးလကေို တခကျြ ပုတျလိုကျတယျ။
ကလေးမလေး ကတော့ ပါးခြိုငျ့လေးတှေ ပျေါအောငျ ပွုံးရငျး သူ့လကျထဲက မကောငျးတဲ့ ပနျးသီးကိုသာ ကိုကျစား လိုကျတယျ။
လူ့လောကမှာ ကိစ်စတခုကို စောလငျြစှာ မဆုံးဖွတျပါနဲ့။ မှားယှငျး တတျပါတယျ။ အခြိနျ ယူရပါမယျ။ အမှနျတရားက နောကျကမြှ ရောကျလာ တတျတာ သတိ ပွုသငျ့ပါတယျ။
ဒေါကျတာ အေးမငျးထူး (၂၇.၁ . ၁၈) (the child and apple ကို ဆီလြှျောအောငျ ဘာသာပွနျသညျ)
တခါက အသက် ၅ နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး တယောက်ဟာ မိခင်ဖြစ်သူ ပေးထားတဲ့ ပန်းသီးလေး နှစ်လုံးကို လက်ထဲ ကိုင်ပြီး ဆော့ကစား နေတယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာပဲ မိခင်ဖြစ်သူက သူ့အနား ရောက်လာပြီး "သမီး မစားရင် မေမေ့ကို ပန်းသီး တလုံး ပေးပါလား" လို့ ပြောတော့ ကလေးဖြစ်သူက ပန်းသီး နှစ်လုံးကို ကြည့်ပြီး တွေသွားတယ်။
နောက်တော့ ဘာမပြော ညာမပြော ပန်းသီး တလုံးကို ချက်ချင်း ကိုက်လိုက်တယ်။ မိခင်လုပ်သူက ပိုနေတဲ့ ကျန်တလုံးကို ပေးမယ် အထင်နဲ့ စောင့်ကြည့် နေပေမယ့် ကလေးငယ်က နောက်ပန်းသီး ကိုလည်း မပေးပဲ ထပ်ကိုက် ပြန်တယ်။
ထိုအခြင်းအရာကို မြင်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူလည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားတယ်။ ရင်ထဲ နာကျင်သွားပြီး ကလေးဖြစ်သူ အနားက ထွက်မယ် လုပ်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ကလေးဖြစ်သူက သူကိုက်လက်စ ပန်းသီး တလုံးကို လှမ်းပေး လိုက်တယ်။ "မေမေ ဒီအလုံးလေးက ပိုချိုတယ်၊ ဒါလေး စားကြည့်လိုက်" လို့ ကလေးငယ်က ချစ်ဖွယ် ပြုံးရင်း ပြောတယ်။
ထိုအခါမှ အဖြစ်မှန်ကို ရိပ်မိလိုက်တဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဟာ ကြည်နူးစွာ ပြုံးလိုက်တယ်။ နောက်တော့ သူပေးတဲ့ ပန်းသီးလေးကို ယူပြီး ခေါင်းလေကို တချက် ပုတ်လိုက်တယ်။ ကလေးမလေး ကတော့ ပါးချိုင့်လေးတွေ ပေါ်အောင် ပြုံးရင်း သူ့လက်ထဲက မကောင်းတဲ့ ပန်းသီးကိုသာ ကိုက်စား လိုက်တယ်။
လူ့လောကမှာ ကိစ္စတခုကို စောလျင်စွာ မဆုံးဖြတ် ပါနဲ့။ မှားယွင်း တတ်ပါတယ်။ အချိန် ယူရပါမယ်။ အမှန်တရားက နောက်ကျမှ ရောက်လာ တတ်တာ သတိ ပြုသင့်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ အေးမင်းထူး (၂၇.၁ . ၁၈) (the child and apple ကို ဆီလျှော်အောင် ဘာသာပြန်သည်)